पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या दोस्रो लहरकै सबैभन्दा कम बिन्दु १ हजार ३८८ मा आइपुगेको छ । यसअघि दोस्रो लहरको कम संक्रमण असार २० गते १ हजार ६०३ जनामा देखिएको थियो । तर आइतबार असार २० गतेको भन्दा २१५ जना कम संक्रमित भेटिएका हुन् ।
आइतबार १० हजार २९७ नमुना ९पीसीआर र एन्टिजेन० परीक्षण गर्दा १ हजार ३८८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । असार २० गते ८ हजार १३२ नमुना परीक्षण गर्दा १ हजार ६०३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । असार २० गतेको संक्रमणदर १९।७१ थियो भने आइतबार १३।४८ प्रतिशत मात्र छ ।
चैत दोस्रो हप्तादेखि शुरु भएको कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा सबैभन्दा बढी वैशाख २८ गते २१ हजार ३१६ नमुना परीक्षण गर्दा ९ हजार ४८३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला संक्रमण दर ४४।४९ प्रतिशत थियो ।
अन्य दिनको तुलनामा पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमण कम पुष्टि भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर यही तथ्यांकलाई हेरेर संक्रमण घट्यो भन्ने बेला आएको छैन (डा। कृष्ण पौडेल, प्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या पनि घटेको छ । केही दिनयता अस्पतालमा उपचार गराउन आउने संक्रमितको संख्या घटेको अस्पतालका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दोस्रो लहर उत्कर्षमा रहेका बेला बेड भरिएर प्रांगणमा अस्थायी बेड राखेर उपचार गरिएको थियो । निर्देशक डा। अनुप बास्तोलाका अनुसार हाल आईसीयूमा १५, स्पेशल क्याबिनमा ७ र कोभिड वार्डमा २३ जना संक्रमित उपचाररत् छन् ।
कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल ९वीर अस्पताल०का प्रमुख कार्यकारी डा। भुपेन्द्र बस्नेतका अनुसार आईसीयू र भेन्टिलेटर कक्ष समेत खाली छन् । आईसीयूसहित कोभिड वार्डमा गरी ११७ जना संक्रमित उपचाररत् रहेको उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डा. प्रवीण नेपालका अनुसार आईसीयूमा १६ जना र भेन्टिलेटरमा ९ जनासहित ९२ जना संक्रमित उपचाररत् छन् ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालका सम्पर्क व्यक्ति डा. सुन्दर हैजुका अनुसार आईसीयू र भेन्टिलेटरमा १७/१७ जना संक्रमित उपचाररत् छन् । १२ एचडीयू बेड भने खाली छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भने संक्रमितको चाप पहिले जस्तै रहेको अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा। निरज बम बताउँछन् । उनका अनुसार अस्पतालमा दिनमा १५ जना संक्रमित भर्ना हुने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। कृष्ण पौडेल एकै दिनको तथ्यांकलाई हेरेर संक्रमण घट्यो भन्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘अन्य दिनको तुलनामा पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमण कम पुष्टि भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । तर यही तथ्यांकलाई हेरेर संक्रमण घट्यो भन्ने बेला आएको छैन,’ डा। पौडेलले भने । उनले अस्पतालहरुमा बेड नपाउने अवस्था भने अहिले नरहेको बताए ।